Ireo sary mihetsika 14+ Ping Pong tsara indrindra ho an'ireo mpankafy Anime - Hafa
Ny 14+ Ping Pong tsara indrindra dia ho tian'ireo mpankafy sary mihetsika
Ping Pong The Animation nalaina nalaina tamin'ny endri-tsoratra:
Ping Pong Ilay Animation dia andiany tokana eo amin'ny sokajy Seinen. Miaraka amin'ny sarimiaina sy zavakanto tsy mitovy amin'ny nahazatra anao.
Anisan'ny mahasarika azy io. Ary ny foto-kevitra sy ny hevitra dinihiny no manome aina ny teny nalaina.
Ity dia ampahany amin'ny anime fanatanjahan-tena koa noho izany ny teny nalaina dia mety hanome aingam-panahy.
Ity ny andalana tsara indrindra avy amin'ny Ping Pong The Animation!
1. Sakuma Manabu Quotes
'Rehefa ampy ny fotoana, ny talenta sy ny tontolo iainana dia tsy ny zava-dehibe ihany. Amin'ny farany, ny asa mafy dia manome fotoana hamirapiratra! ” - Sakuma Manabu
“Naneso ahy ianao taloha. Fa fantatrao ve? Indraindray dia misy valiny io ezaka io. ” - Sakuma Manabu
2. Ryuichi Kazama Quotes
'Tsy misy hitsin-dàlana mankany amin'ny fandresena. Tsy maintsy miakatra an'io tendrombohitra mideza io ianao isaky ny mandeha. Misy hantsana ambany eto ambany ary tsy mifarana mihitsy. Ny hany tanjonao dia ny miakatra hatrany! ” - Ryuichi Kazama
“Fantatrao fa ny trondro sasany dia misafidy ny hipetraka anaty rano mihandrona, Tsukimoto. Toetran'izy ireo izany, tsy hiova mihitsy izy ireo. ' - Ryuichi Kazama
“Teny nandaitra ny fony tamin-kitsim-po.” - Ryuichi Kazama
3. Peco Hoshino Yutaka Quotes
ny fiainana dia nofinofy koboako bebop
'Lehilahy mahafinaritra ianao. Tiako izany. Aza mieritreritra anefa fa afaka mijanona hatreo ianao ary manambany ny olona mandrakizay. ' - Hoshino Yutaka
“Mampatahotra izy raha mampitahotra. Hevero fa mpitondra an'izao tontolo izao ho anao io. Tsia, raha avelako hanatona ahy izy dia vita. Flinch dia ho resy aho! Matahora azy dia ho faty aho! Inty aho! ” - Hoshin Yutaka
misy zavatra iray mitazona ny avonavona foana ny saiyaniana
'Hoshino Yutaka no anarako ary aza adino izany!' - Hoshino Yutaka
4. Tamura Obaba Quotes
'Tsy misy olona mikendry ny tampony raha tsy mifanenjika amin'ny biby goavambe amin'ny farany.' - Tamura Obaba
'Ireo mpandresy dia manoratra tantara, ary ireo resy dia tantara '… Hitako fa manimba olona maro ny toe-tsaina.' - Tamura Obaba
5. Koizumi Jou (lolo Joe) Teny nalaina:
“Manaiky mora foana ianao raha manaiky mora foana! Tsy afaka manidina manerana ny ranomasina amin'ny elatra manify ianao. ” - Koizumi Jou
'Misy olona tsara kokoa noho ianao foana.' - Koizumi Jou
'Tsy fahita izany. Ny olona manan-talenta izay mahalala ny tenany dia tsy mitady zavatra velively. Ny olona tsy mahalala ny tenany foana no tena miady mafy mba handresy, satria te hanaporofo zavatra iray izy ireo. ' - Koizumi Jou
6. Mitsikia Makoto Tsukimoto Quotes
“Isaky ny nilalao tenisy ambony latabatra ianao dia nanana fotoana nahafinaritra dia hadinonao ny ratra rehetra. Ho tsara ny lohalinao. Tahaka ny nolazainao hatrany. Ny mpilalao matanjaka indrindra dia mamela anao hisidina ambony indrindra. ' - Makoto Tsukimoto
18+ LEHIBE Ilay Andriamanitry ny lisea avy amin'ny ambaratonga faharoa dia hankasitraka ny mpankafy
The 20+ Makoto Shinkai tsara indrindra momba ny fiainana sy ny Anime
16+ Mpandray anjara Anime izay TIA MITIA Hoodies!
26+ amin'ireo mpanangona sary Anime Anime tsara indrindra dia hankasitraka
8 Holo Ny Wolf Wolf hendry Anime Fans dia ho tia
Hira famaranana Anime 23 malaza tsy fantatra (Araka ny isan'ny fahitana)
Lesona 5 momba ny fiainana tsara avy amin'i Yuuki Konno mba hahazo aingam-panahy
Ny teny lehibe indrindra mihoatra ny fetra izay hamerina anao!
Ny lisitry ny teny haibane renmei tsara indrindra tokony hotadidina
Teny Satsuki Kiryuin 11 izay misy dikany sy manentana ny fanahy
Re: Zero Season 2 Efa Saika Hivoaka Amin'ny Aprily 2020 (Daty Ofisialy)
The 35+ Anime Quotes tsara indrindra avy amin'ny fiainana mampidi-doza an'ny Saiki K!
andian-tsarimihetsika anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra